.ထမင္းစားျပီးေနာက္ မလုပ္သင့္သည့္ အႏၱရာယ္ (၈)ရပ္ – Askstyle
.ထမင္းစားျပီးေနာက္ မလုပ္သင့္သည့္ အႏၱရာယ္ (၈)ရပ္
ေရွး လူၾကီးမ်ာက “ထမင္းစားျပီး အခ်ိဳစား၊ ေျခလွမ္း ၂၀၀ သြား” ဟု အဆို ရွိခဲ့ၾကေလ၏။ ထို အဆိုမွာ တက္ တက္ စင္ မွားယြင္းေန ေၾကာင္း ယေန ့ေဆးသိပၸံပညာရွင္ မ်ားက အတည္ျပဳထားၾကသည္။
အေၾကာင္းရင္း မွာ …. ထမင္း စားျပီးခ်င္း ခပ္ သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း က ဗိုက္ေအာင့္ေစတတ္ျပီး၊
Sein Minn Tha Mee
ထမင်စားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီး စားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားခြင်းက လေပွစေပြီး၊ အစာအိမ် ကို ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေ၏။
ထို့ကြောင့် ထမင်းစားပြီး အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် ကြာမှ သာ သစ်သီး စားသင့်သည်။
(ကျမ္မာရေး အမြင် ရှိသော ဟိုတယ်ကြီးများနှင့် စားသောက်ဆိုင် အချို့တွင် သစ်သီးအစား၊ ဥပမာ … ဌက်ပျောသီးပေါင်း (သို့မဟုတ်) ရွှေဖရုံသီးပေါင်း စသည့် တို့ကို အချိုပွဲ အဖြစ်တည်ခင်း ဧည့်ခံလာကြသည်)
လ္ဘက်ရည် အချိုခြောက် ထဲတွင် အက်ဆစ်ဓာတ် အမြောက်အများ ပါရှိကြပေရာ၊ ၎င်းတို့က ထမင်း ဟင်းထဲ တွင် ပါရှိသည့် ပရိုတင်း များကို အနှောင့် အယှက်ပြုကာ အစာချေဖျက်မှု ကိုလည်း ဟန့်တားစေပါသည်။
ရှေး လူကြီးမျာက “ထမင်းစားပြီး အချိုစား၊ ခြေလှမ်း ၂၀၀ သွား” ဟု အဆို ရှိခဲ့ကြလေ၏။ ထို အဆိုမှာ တက် တက် စင် မှားယွင်းနေ ကြောင်း ယနေ့ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက အတည်ပြုထားကြသည်။
အကြောင်းရင်း မှာ …. ထမင်း စားပြီးချင်း ခပ် သွက်သွက် လမ်းလျှောက်ခြင်း က ဗိုက်အောင့်စေတတ်ပြီး၊
ထမင်း ဟင်း ထဲမှပါဝင်သော အာဟာရ စုပ်ယူရန် အတွက် အစာချေ စံနစ်ကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ် စေ တတ် သည်။ (ထမင်းစားပြီး ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်နေရမည် ဟု မဆိုလိုပါ) ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ်စေဖို့အတွက် ထမင်းစားပြီး ပါက အနည်းဆုံး ၁၅-မိနစ်ခန့် မတ်တပ် ရပ်နေပါ (သို့မဟုတ်) ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်
အားကစား မလုပ်ခင် အနည်းဆုံး နာရီဝက် မှ အများဆုံး ၂-နာရီ ခန့်ကြိုတင်၍ ထမင်းစားထား ပါ။ သို့မဟုတ် ပါက၊ အကြော ဆွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ရုတ်တရက်နှလုံးခုန် ရပ်တန့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အသက်သေစေနိုင်သည်။
(ဆောင်းပါးရှင်…ပေါက်ပေါက်၏ ဆောင်းပါးအား ကူးယူမျှဝေပါသည်)